Chizvarwa chekutanga Apple Watch uye Series 1 hazvina kufanana | Ndinobva mac
Pakutanga ndaive nekusahadzika kwangu, uye ndiko kuti vese vashandisi vaive nazvo. Chii zvachinja? Iyo wachi itsva ndeyeApple Watch Series 2, saka chii chaizvo chiri Series 1? Zvakanaka, ini ndichakupindura: Iyo itsva modhi, hongu, gore rino, yakagadziridzwa uye nyowani nyowani. Ndeipi imwe nhevedzano yakasiyana neimwe? Ndeipi yandinofanira kutenga zvichienderana nekushandisa kwandinopa uye nemushandisi zvazviri? Zvakakosha here kuchengetedza € 100 uye kusarudza nhevedzano 1 kana zvirinani ndinosvetukira kune wechipiri?
Nhasi ndichataura nezvazvo, uye ndezvekuti ndatora danho rakakosha. José Alfocea akatondinyevera kuti aizochinja pfungwa kakawanda pamusoro peizvi. Ndakataura zvakawanda zvandisina kukurudzira Apple Watch Series 2 uye zvaitaridzika kunge zvaidhura pane zvazvaive. Ini ndinonamira pane izvi, ndosaka ndafunga nezve kutenga iyo Series 1 aluminium izvozvi. Ndanga ndichidzidza zvakawanda nezve mutsauko uye zvakanakira nekuipira pakati pemhando mbiri idzi. Verenga pamusoro nezve ruzivo rwewatch uye angu ekutora pane izvi.
1 Apple Yekutanga Series 1 kana Series 2?
2 Izvo iwe zvaunowana mune Series 2
3 Kufanana kunonzwisisika, mitengo isingaite
Apple Yekutanga Series 1 kana Series 2?
Sekutaura kwangu, ini ndaona zvinyorwa uye nhau dzinoti iyo nyowani ndeye Series 2 nepo imwe iri 2015. Hazvina kudaro. Ichokwadi icho mukugadzirwa zvese zvakafanana uye kuti zvimwe kana zvishoma chishandiso chimwe chete, asi pane chimwe chinhu chinoshanduka. Pakati pekutanga Apple Watch uye Series 1 pane misiyano yakati wandei. Mukutaura ingori processor chete, asi izvo zvinoshandura kuita: Bhatiri rakawanda, kuita zviri nani, mukuwedzera pasimba risati ramboonekwa neiyo nyowani-mbiri processor. Asi ndeyekuti mutsauko watichawana nekuremekedza iyo nyowani Series 2 haina kuwandawo zvakare. Vazhinji vashandisi vari kuenda kunotenga wachi vachaenda kune iyo nyowani, iyo inotanga pa € ​​439, inova ndiyo yavakapa seyachinja, asi iyo Series 1 inogona kukurudzirwa zvakanyanya kana isu tisiri kuzogadzira. kushandiswa kwezvinhu zvitsva. Saka kuti uve nazvo zvakajeka. Pazasi ini ndichatumidza uye nditsanangure muchidimbu izvo Series 2 ine iyo Series 1 isingaite.
Izvo iwe zvaunowana mune Series 2
Hukuru hukuru uye katarogu yemamodeli. Series 2 inowanikwa mune ese mamodheru, kubva kualuminium kuenda kuEdhiyo kuburikidza nesimbi isina chinhu. Kune rimwe divi, iyo Series 1 inongowanikwa chete mune yealuminium imwe ine silicone tambo. Asi kana iwe uchizosarudza iyi modhi, iwe unenge usina kana dambudziko kusarudza pakati peimwe nhevedzano neimwe.
GPS yakavakirwa mune mbiri-musimboti processor. Haisi processor irinani yeChikamu 2, zvakafanana. Inokurumidza kupfuura yekutanga wachi ya2015, asi ese ari maviri akateedzana gore rino akafanana. Kana iwe uchida kana iwe uchida iyo GPS, iwe uchafanirwa kutanga kubva kune ino modhi, sezvo iyo Series 1 isina iyo.
Iyi Apple Watch inonyudza kusvika pamamita makumi mashanu mumvura. Series 1 yaive kupenya nemishonga, kungofanana neiyo iPhone 7 uye 7 kuwedzera. Izvo hazvireve kuti waranti inovhara kuputsa kwemvura, asi inopona uye kune vamwe vashandisi vanogeza kana kugeza nayo. Iyo Series 2 hongu unogona kuinyorovesa usingatyi ndokuenda nayo kumahombekombe, gungwa kana rwizi uye dziva mune chengetedzo yakakwana.
Chidzitiro chakajeka kupfuura nakare kose. Kusvika pakapetwa. Series 1 inokwira kusvika kuma 450 nits, Series 2 kunyangwe 1000 nits. Ivo vaviri vanotaridzika vakakura, kunyangwe muzuva, saka hazvina kukodzera kuwedzera kwemutengo.
Kufanana kunonzwisisika, mitengo isingaite
Ndizvozvo, iwo misiyano yeApple Watch. Chinhu chekupedzisira chinopatsanura zvakateedzana ndiwo mutengo. Musiyano uri € 100. Zvakakosha kubhadhara zvakanyanya iyo GPS, kugona kuinyudza, kana inopenya skrini. Ini ndinofunga izvo kwete kwandiri, nekuti ini ndanga ndisiri kuzoshandisa izvo. Ini ndinoda kuchengetedza mari, ndichiziva kuti yangu modhi ndiyo silicone imwe uye iri mune ese akateedzana. Simba rakafanana uye nekudaro harizosiiwe kumashure. Iyo 38mm Series 1 modhi inodhura € 339 uye iyo 42mm modhi € 369. Ini ndinoenda kune iyo hombe, sevazhinji vashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chizvarwa chekutanga Apple Watch uye Series 1 hazvina kufanana
Mubvunzo… ndeupi musiyano uripo pakati peMutambo neChikamu chechipiri?
Kana ndangariro ichindishandira nenzira kwayo, mutsauko uripo pakati peWatch Sport (chizvarwa chekutanga) uye neChipiri 2 ndechekuti iyo yekupedzisira inosanganisa GPS, inopenya skrini, uye nyowani, inokurumidza chip. Ini ndinofunga hapachina misiyano, kunyangwe ndichifunga kuti ndinorangarira kuti inosanganisa bhatiri rakati wandei, asi kuwedzera uku kwakamiswa nekudyiwa kweGPS.
Ndine urombo, ndanga ndichireva nhevedzano 1. Ndiwo musoro wenyaya asi hauna kuzvienzanisa
Kurudyi, ndakufananidza newe Series 2. Zvakanaka ini handisi munyori wenyaya haha. Musiyano uripo pakati peMitambo (chizvarwa chekutanga nekuti nekudaro haisisipo), uye neWatch Series 1, ndeyekuti iyo skrini inopenya yakajeka uye processor inokurumidza. Ini ndinofunga ndiwo chete misiyano. Iyo wachi yakafanana asi yakagadziridzwa zvishoma mune izvo zvinhu.
Iwo 7000 akateedzana; kune iyo ndeyakateedzana 1 kana nhevedzano O.Wanga uri chii mutengo mutsva weiyo 7000 akateedzana? Ndokutenda zvikuru
Surf chikamu neiyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus